Kuchengetedzwa Kudzivirirwa Mudziyo SPD Mugadziri & Mutengesi
Oiri negesi indasitiri
Chemical uye mishonga indasitiri
Mwenje ye LED SPDs
Isu tiri Surge Dziviriro Chishandiso Chaiye Mugadziri ine mhando yayo uye inopawo OEM uye ODM Services.
Isu tinochengeta nehunyanzvi uye nekuzvipira - kuitira kubatsira vatengi vedu, vatinoshanda navo, uye vashandi.
Surge kinga yekuchengetedza (SPD) Dzivirira Zvinhu zvako
Kana iwe uchida kuve mumiriri wedu mumusika wako, isu tichava yako yakasimba backup.
Isu tinopa yepamusoro-soro technical technical kuburikidza neboka revarairidzi. Rubatsiro runovimbiswa nefoni, E-mail kana musangano weWhatsapp uye nekuwedzera, vashandi vedu vehunyanzvi vanoita ongororo pazvirimwa pasi rese zvinoda kuchengetedzwa zvichipa kunyanya kuenzana kweiyo SPD system uyezve yakanakisa yekumisikidza uye gungano mirairo. Chikwata cheinjiniya chinoronga zvikamu zvekudzidzisa zvakatsaurirwa kune vese vatengesi 'simba rekutengesa uye zvakananga kune vatengi.
Vatengi vanogona kuvimba neyakavimbika tekinoroji rutsigiro hwakazara, kurongeka uye kuremekedza kwakasimba kwezvavanoda. Kambani yedu inoita saizi uye dhizaini yesystem, mukubatana nevagadziri nemainjiniya, kunyanya akaomarara, uye inopa rutsigiro rwehunyanzvi nekutengesa.
LSP ikambani inoenderana nekushanduka-shanduka, inogara ichitsvaga kugona uye pamusoro pehunhu hwese.
Chikwata chedu chinoumbwa nevashandi vane hunyanzvi uye vane ruzivo, isu tinoedza kugara tiri nhanho imwe kumberi mukuvandudza.
LSP Inozo Chengeta Sei Yako Order
1.Receive yekutanga dhizaini pfungwa kana sampuro kubva kwauri
A. Unotitumira yako dhizaini mazano kana yako CAD kudhirowa, isu tinogadzira yemahara CDR mifananidzo iwe.
B. Unotenga mifananidzo yeCDR yakajeka kubva kukambani yekugadzira uye wotumira kwatiri, tinogadzira sampuro yeSPD zvinoenderana nemifananidzo yako yeCDR.
C. Titumire yako chigadzirwa sampuro, isu tinogadzira yakafanana dhizaini seyako sampuro yeOEM odha.
D. Sarudza kubva kune yedu iripo renji, isu tine akawanda magadzirirwo ePSD - kana iwe uchida dhizaini yedu, ingo sarudza iyo kubva kune yedu gallery kana kutirovera runhare kune mamwe mazano mazano
2.100% Kuongorora kweChikamu Chega chega mushure meMusangano
Tichaedza mashandiro eSDD yega yega kuona kuti inosangana nezvaunoda.
3.Professional musangano wedhipatimendi
Kuunganidza zvese zvinongedzo uye zvishongedzo muzvakagadzirwa zvigadzirwa zvinoitwa nevashandi vehunyanzvi uye vatariri vanokwanisa ndivo vane basa rekupedzisira kugamuchirwa kwechigadzirwa.
4.Professional pa-mutsara QC Chikwata
Zvinoenderana nezvinodiwa mukugadzira, zvese zvigadzirwa zvinoonekwa uye mashandiro anofanira kupfuura 100% online kuongororwa neQC inokwanisa panguva yegungano.
5. Gutsikana Zvese Zvako ZvePakeji Zvinodiwa
Kutevera chigadzirwa kuongorora, isu tichaisa zvinhu maererano nezvose zvaunoda. Ruvara rwebhokisi, maviri blister kana pallet. Isu zvakare tichakutumira iwe yakadzama mifananidzo yemhando yega yega yekutakura maitiro.
6 Yakachengeteka uye paNguva Kutumirwa
Kugadzirira kwega kwega kwekutakura kunoitwa pasi pekutarisisa. Isu tinopa mifananidzo yega yega nhanho yeichi chiitiko kusanganisira mifananidzo yemudziyo wakachengetedzwa. Nekuda kwemabatiro akaomarara uye kutarisa padhuze nguva dzese isu tinokwanisa kubvisa zvikanganiso mukutakura zvinhu zvako.
7.Uchawana ese ekurodha mifananidzo uye zvinyorwa
Isu tinokupa iwe ese ekurodha mapikicha, uye yedu ine ruzivo yekutakura timu inokutumira iwe zvese zvinyorwa mushure mekurodha kwapera.
Takasarudza LSP nekuti vanga vakavimbika kubva pazuva rekutanga. Vane hunyanzvi uye vakarovedzwa zvizere vashandi izvo zvinotibatsira kuteedzera maodha edu uye anogara achifara kupa yakadzama mapikicha echigadzirwa chimwe nechimwe kana maitiro ekugadzira - izvo zvinotibvumidza kuteedzera nhanho yega yega maitiro edu ekuraira. Zvese zvigadzirwa zvinonunurwa mukati mekubvumirana nguva zviyero zvakakosha kubhizinesi redu.
Shelly Siss, Furanzi
Ini ndinowana kubata LSP inogutsa kwazvo, iine yakatwasuka kumberi yekuodha maitiro uye yakanakisa tekinoroji inoshandiswa kugadzira zvigadzirwa. Ivo zvirokwazvo nyanzvi mumunda wavo uye mudiwa akasimba webhizinesi redu.
Anna Ventura, SPEINI
LSP yanga ichigadzira yedu SPD Kuchengetedzwa Kudzivirirwa Kudzi kubva 2012. Chigadzirwa chega chega chave chemhando yepamusoro uye chakagamuchira mhinduro yakanaka kubva kuvatengi vedu. Ndatenda!
Erice Herman, CHIRE
Kana iwe uine mibvunzo, yedu yekukurumidza-kupindura vatengi rutsigiro iri pano yako.
Signal Wires Kuchengetedzwa Kudzivirirwa Mudziyo
Masaini waya anodzivirira mudziyo Dehn - IT masisitimu DIN Rail yakaiswa SPD [...]
Inogadziriswa maviri-pole Rudzi 3 T3 yekuwedzera inosunga DR M 2P IL = 25A
Inogadziriswa maviri-pole Rudzi 3 T3 yekuwedzera inosunga DR M 2P IL = 25A DEHNrail modular Mbiri-pole [...]
Kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwe5G cell site (mobile base station)
Kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwe5G cell saiti (nharembozha base chiteshi) Kuchengetedza magetsi Kupe [...]
Wenzhou Arrester Magetsi Co., Ltd.
Wedzera: 5th FL, No. 666 Yaming Road, Xiangyang Industry Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Nhare mbozha: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
Email: kutengesa [@] lsp-international.com